China faiba glaasi tube rụpụta na Factory | Yan Tuo
Faiba glaasi ngwaahịa na-akpụzi site na solidification nke faiba glaasi na resin n'okpuru elu okpomọkụ. Njupụta ya bụ nanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ígwè, na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke aluminom.
Anyị nwere ike izute ihe ndị ahịa chọrọ maka ogologo na dayameta nke eriri eriri carbon. Ogologo ya nwere ike ịdị mita iri na dayameta nwere ike iru 500mm. Na mgbe elu mmepụta usoro na nlezianya àgwà akara, anyị nwere ike na-elu-edu ngwaahịa.
Njirimara profaịlụ FRP
1. Corrosion eguzogide:
Ngwaahịa na-eguzogide ọgwụ corrosion nke gas na mmiri mmiri nke acid, alkalis, nnu, na organic ihe mgbaze nke mere na ha nwere ike izere nsogbu nke nchara nchara na rere ure osisi.
2. Ihie dị arọ na ike dị elu:
Faiba glaasi ngwaahịa na-akpụzi site na solidification nke faiba glaasi na resin n'okpuru elu okpomọkụ. Njupụta ya bụ nanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ígwè, na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke aluminom. Ma ike ya dị okpukpu iri nke PVC, karịa ngwaahịa aluminom ma rute ogo nke carbon carbon nkịtị. N'ihi ibu dị arọ ya, ngwaahịa ndị ahụ chọrọ nkwado nkwado dị ala ma nweta atụmatụ nke nrụnye dị mfe na ọnụ ala.
3. Na-agbagha agbagha:
Nchịkọta oxygen nkịtị nke ngwaahịa fiberglass nkịtị dị n'elu 32 (dị ka GB8924). Site na imewe, ire ọkụ na-agbasa ngwa ngwa nke ngwaahịa ethylene dị elu dị n'okpuru 10, nke na-ezute ihe ndị chọrọ nke ọkụ ọkụ maka nchekwa.
4. Collision Nguzogide na Ike ọgwụgwụ Nguzogide:
Faiba glaasi ngwaahịa nwere ike iguzogide nkukota na na-na mbụ udi mgbe ugboro ugboro ekwe ka na-eji dị ka mmiri.
5. Nguzogide Age:
Ogologo oge nkịtị bụ ihe karịrị afọ 20. Nsonaazụ nyocha ahụ gosipụtara na ike ahụ ka ga-ejigide karịa 85% mgbe afọ 20 gachara ikuku.
6.Ọdịdị dị mma na Ndozi Mfe:
A na-agwakọta agba nke slurry nke ngwaahịa fiberglass na resin iji mee ka agba ahụ na-enwu gbaa ma sie ike ịda. Ọ dịghị eserese dị n'elu nke dị ọcha mgbe ịsachara.
FRP anwụrụ ngwa
nwere ike izute ihe ndị a kapịrị ọnụ nke ndị ọrụ chọrọ, a ga-ejikwa ya mee ihe na apịtị dị nro, mpaghara mmiri na-ada ada, mpaghara ọdọ mmiri na oke mmiri na-emebi emebi, wdg. Ọ adopts zuru ezu set nke tube ohiri isi Nchikota na mejupụtara multilayer anwụrụ akara ụzọ. O nwekwara ike ịbụ tube nchebe mgbe eriri gafere àkwà mmiri ma ọ bụ osimiri.
1. Ewu obodo ike grid ewu na oru ngo.
2. City ọchịchị mmezi oru ngo.
3. Ewu ụgbọ elu ụgbọ elu obodo.
4. Ogige ụlọ ọrụ, iwu obodo.
5. Okporo ụzọ na okporo ụzọ na-arụ ọrụ mmiri.
Nke gara aga: OEM Oku Azụ